Indlu kwindawo efanelekileyo nethuleyo - I-Airbnb
Indlu kwindawo efanelekileyo nethuleyo
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uMaría iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indlu endala elungiselelwe kwisiqithi saseMazarron. Indawo ephambi kwesiqithi kunye neklabhu yaselwandle, kwindawo ethe cwaka kakhulu. Ineendawo ezijonge ulwandle ezisemagqabini. Iqaqambe kakhulu kwaye ipholile. Iinyanga zikaJulayi noAgasti ziqeshiswa kuphela ngeveki ( 1-15 no-15-30) okanye inyanga epheleleyo. Izaphulelo nazo azisebenzi.
Indlu endala elungiselelwe kwisiqithi saseMazarron. Indawo ephambi kwesiqithi kunye neklabhu yaselwandle, kwindawo ethe cwaka kakhulu. Ineendawo ezijonge ulwandle ezisemagqabini. Iqaqambe kakhulu kwaye ipholile. Iinyanga zikaJulayi noAgasti ziqeshiswa kuphela ngeveki ( 1-15 no-15-30) okanye inyanga epheleleyo. Izaphulelo nazo azisebenzi
Indlu endala elungiselelwe kwisiqithi saseMazarron. Indawo ephambi kwesiqithi kunye neklabhu yaselwandle, kwindawo ethe cwaka kakhulu. Ineendawo ezijonge ulwandle ezisemagqabini. I…